Kukhona ezinye izinto ezingafuneki kufayela le-PST elihleliwe. Ungaziqeda kanjani? - DataNumen
Wazi kanjani ukuthi ngabe umkhiqizo wakho ungalungisa / ubuyisele ifayili lami elonakele?
Ngihlulekile ukulungisa ifayela lami ngomkhiqizo wakho, ngani?
Ngithola isinambuzane somkhiqizo wakho. Okufanele ngikwenze?
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe ifayili lami liyatholakala yini ngedwa?
Ifayela lami alinakululama Iyiphi indlela yami yokugcina?
Ngifuna isici esingatholakali kumkhiqizo wakho. Okufanele ngikwenze?
Ungaxazulula kanjani iphutha "lokwabelana ngokwephula"?
Ibha yenqubekela phambili ayishintshi (noma ishintsha kancane) futhi uhlelo luba yiqhwa. Okufanele ngikwenze?
Ngabe ngidinga ukukhipha inguqulo yedemo ngaphambi kokufaka inguqulo ephelele?
Ungayikhipha kanjani isoftware yakho?
Uyini umehluko phakathi kwenguqulo yedemo nenguqulo ephelele?
Ngingakwazi ukusebenzisa ifayili elilungisiwe elenziwe inguqulo yedemo, ngemuva kokuthola inguqulo ephelele?
Yini okufanele ngiyenze ngemuva kokuthola inguqulo ephelele?
Ngingayisebenzisa yini isoftware yakho ukulungisa ifayili elonakele leMac?
Ngabe inguqulo ephelele izolulama idatha eningi kuneyedemo?
Kuzothatha isikhathi esingakanani uhlelo lwakho ukulungisa ifayili lami?
Ungawuthuthukisa kanjani umkhiqizo wami?
Ifayela lami selivele lingene.zip noma.rar ifomethi. Ungayicindezela futhi uyibethele kanjani futhi nge-WinZip noma WinRAR?
Ngabe uhlelo lwakho lusebenza ku-MacOS?
Ngingakwazi ukukhipha i-database engaguquki kufomethi ye-Access 95/97?
DataNumen Outlook Repair/ Ukubuyiswa Kwe-Exchange
Ngithola iphutha elithi "Out of memory" lapho ngilungisa i-PST /OST ifayela. Okufanele ngikwenze?
Kungani ngingawatholi ama-imeyili noma ezinye izinto kufayela le-PST elihleliwe?
Kunezinto ezithile ezingafuneki kufayela le-PST elihleliwe. Ungaziqeda kanjani?
Ngifometha idrayivu yami. Ngingabe ngisakwazi ukuthola idatha yami ye-Outlook?
Kungani izidumbu zemiyalezo etholakele zingenalutho?
Uyini umehluko phakathi DataNumen Outlook Repair futhi DataNumen Outlook Drive Recovery?
Uyini umehluko phakathi DataNumen Outlook Repair futhi DataNumen Exchange Recovery?
Kungani eminye imininingwane ingatholakali?
Kungani iphasiwedi etholakele yehlukile kuleyo engiyisethile?
Ungayilungisa kanjani ukwahlukana zip ifayela?
Ungayilungisa kanjani into evulekile zip ifayela?
Kusho ukuthini isimo esingabuyiseka embikweni wedemo?
Kungani izinkambu eziningi zedethi ku-database elungisiwe zisethwe ku-1900-01-01?
Kungani ngisahluleka ukuvula okungaguquki DBF ifayela?
Ngicacisa isithombe se-C yami: idrayivu. Ungayibuyisela kanjani?
Ungasifaka kanjani isithombe esenziwe ngu- DataNumen Disk Image
Ungayi-oda kanjani inguqulo ephelele yomkhiqizo?
Kwenzekani ngemuva kokuthumela i-oda?
Ngikhokhelwe intela. Ungayivimba kanjani intela yokuthengisa ku-oda lami?
Ngabe unikeza isaphulelo semfundo?
Ungayibuyisa kanjani i-oda lami?
Ingabe ilayisense lihlala njalo?
Mangaki amakhompyutha engingafaka kuwo umkhiqizo wakho?
Ngingayidlulisela ilayisense kusuka kwikhompyutha eyodwa iye kwenye?
Ungayenza kanjani ingasebenzi ilayisense?
Nginombuzo / inkinga maqondana nenye yama-athikili ebhulogi yakho. Okufanele ngikwenze?
Ungakwazi ukufaka i-backlink kuwebhusayithi yami?
DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery yakhelwe ukuskena yonke i-byte yefayela le-Outlook elonakele futhi ibuyise yonke imininingwane engatholwa, kufaka phakathi izingcezwana zedatha, lost & izinto ezitholakele, kanye nezinto ezisusiwe. Ngakho-ke, kufayela le-PST elitholakele, ungathola amanye ama-imeyili angajwayelekile, kukhona nezinto ezisusiwe, lost & izinto ezitholakele, kanye nezinto ze-imeyili, njengokunamathiselwe. Lokhu sikwenza ngoba most wamakhasimende angathola zonke lezi zinto zilusizo kubo ngemuva kwenhlekelele yedatha eyenzekile.
Ama-imeyili ajwayelekile ayatholakala futhi abuyiselwe kumafolda awo woqobo, afana ne-Inbox, Outbox, njll. Ngenkathi ama-imeyili angajwayelekile azotholwa futhi alondolozwe kumafolda e “Recovered_Groupxxx”.
Uma ungafuni izinto ezingajwayelekile, ungavele wenze ngokulandelayo:
I-1 Start “DataNumen Outlook Repair”/”DataNumen Exchange Recovery"
2. Iya kuthebhu ethi "Izinketho".
3. Chofoza ithebhu "Izinketho ezithuthukisiwe" kuphaneli yesobunxele.
4. Eqenjini le- “Buyisa Izinto Ezisusiwe”, ungahloli konke ongakhetha kukho.
5. Eqenjini le- “Advanced Recovery”, ungakhethi konke ongakhetha kukho.
6. Buyela kuthebhu ethi "Lungisa".
7. Phinda ulungise iPST /OST Ifayela.
8. Vula ifayela elisha le-PST. Uzothola zonke izinto ezingafuneki zinyamalale.
ifayela elilungisiwe, ost, pst, izinto ezingafuneki
Yabelana ngalesi sihloko:
Namanje ubambekile? Singasiza kanjani?
Kubuyekezwe ngoMeyi 16, 2021
Kungani ngingawatholi ama-imeyili noma ezinye izinto kufayela le-PST elihleliwe?Ngifometha idrayivu yami. Ngingabe ngisakwazi ukuthola idatha yami ye-Outlook?
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.6 ikhishwa ngoSepthemba 2, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.6 ikhishwa ngoJulayi 30, 2021
DataNumen Outlook Repair 8.6 ikhishwa ngoJulayi 10, 2021